Atleta telo no hany solontenantsika tany an-toerana tamin’ity dia i Reste Riri (izay niainga avy tany Maorisy) sy Blanc Pierre ary Manirison Jean Louis.
Ho an’ity farany dia tsy 400 misy fefy izay tena tokony nataony no nifaninanany tany noho ny fahataran’ny fanomezana « Dossard » sy ny « Badge » ho an’ireto delegasiona malagasy ity. Ny fahataran’ny fiaingana noho ny « risoriso nataon’ny mpiasa tao Afrika Atsimo », araka ny nambaran’ny lehiben’ny delegasiona no nahatongana izany. Raha tokony hanainga tamin’ny 7 ora maraina izy ireo dia tamin’ny 10 ora vao afaka tao Or Tambo .
Voatery najanona ihany koa teto ny 400m inefatra mifampitohy izay tokony nandraisantsika anjara noho ny tsy nahalasa an’i Lorin Damien.
Na izany aza anefa dia azo heverina fa mbola azo anarenana ny fe-potoana ho azy ireo mandra-pahatongan’ny Lalaon’ny Nosy satria mbola sokajy Cadet ny roa lahy tamin’ireo tany (RIri Reste sy Blanc Pierre).
Mialoha izany anefa dia hiainga ho any Lilles hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ataon’i Riri Reste ho an’ny Cadet.